Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Laurent Koscielny Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
LB waxay soo bandhigaysaa Sheekada Full of Defensive Genius kaas oo loo yaqaan magaca; "Bosscielny". Our Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko iyo Xog-u-dhejinta Xaqiiqada Runta waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqeyntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo xaqiiqooyin badan oo OFF iyo ON-Pitch ah (oo aan yareyn) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay waxa uu leeyahay awoodda difaac ee xoogga leh, laakiin qaar ka mid ah waxay tixgeliyaan nooca Laurent Koscielny's Biography kaasoo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Hore
Laurent Koscielny wuxuu ku dhashay maalinta 10th ee September 1985 ee Tulle, oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn ee gobolka Limousin ee Faransiiska iyo meel qalad ah oo lagu ciyaaro kubadda cagta, iyadoo si aad ah loogu dhaleeceeyay muwaadiniinta. Laurent Koscielny wuxuu u dhashay Mr iyo Mrs Bernard Koscielny kuwaas oo la socda wiilkooda wiilasha Polish.
Laurent wuxuu ku soo koray qoyskooda macdanta Tulle, oo ah wadaad ku yaala bartamaha France, meel halkaa oo uu ka baxo marka uu jiro kubad cagaha ka mid ah. Sheekadiisa carruurnimada waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn - mid ah a wiil yar oo leh mashiinka sheekada hodanka ah oo ku barakeeyey tayo aan caadi ahayn. Laurent inta lagu guda jiro wakhtigiisii ​​carruurnimada waxaa uu heystey go'aamo xasaasi ah si uu u riyoodo riyadiisa. Rabitaankiisa ma ahan kaliya uun soo jiidasho leh. Laurent ayaa u muuqday inuu kubadda cagta yimid, waxaana u mahad celiyay walaalkiis weyn oo xidhan, lakiin marnaba ciyaarta kama aysan dhigin.
In uu erayada ..."Fikradda ah inaan u ciyaaro ciyaaryahan xirfadle ah wuxuu ahaa riyo kaliya, waxoogaa khiyaal ah ilmo kasta oo da'diisa ah ayaa rajeynaya. Wakhtigaas, waxa kaliya ee aan ka fekerayay waxay ahayd inuu ciyaaro kubada cagta, ciyaaro oo mar labaad ciyaaro. Ku raaxeyso nafsadeyda, la joog saaxiibadayda isla markaana wadaagto waqti tayo leh iyaga. Ciyaaraha kubadda cagta oo dhan waan ka walwalsanaa, sida caruurta intooda badani waxay noqon lahaayeen.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xirfadda Soo-koobista
Laurent wuxuu xirfadiisa ku bilaabay 2004 iyadoo Guingamp, koox ay soo saartay awooddaas oo kale Didier Drogba iyo Florent Malouda. Wuxuu bilaabay xirfaddiisa xirfadeed inuu yahay mid gacanta midig ah waxaana qaatay seddex sano oo kaliya ka hor inta uusan awoodin inuu xisaabiyo. Laurent wuxuu sameeyay shaqo badan, allabaryo, iyo cadaadis taasoo keentay inuu u dallacsiiyo kooxda ugu weyn ee Guingamp halkaas oo uu bedelay. Isla markii uu Laurent ahaa 18 sano, wuxuu bilaabay inuu lacag badbaadiyo si uu nafteyda iyo qoyskeyga u siiyo. Ka dibna wuxuu u wareegay kooxda Faransiiska ah sida uu u ciyaaray Tours iyo Lorient, isagoo ka caawiyay mustaqbalka inuu ku biiro kubada cagta Faransiiska.
Waxa uu ahaa qaabka daafaca ee Laurent kaasoo soo jiitay Arsenal oo xaqiijiyay inuu saxiixay heshiiskiisii ​​7 July 2010. Guddiga Arsenal ayaa xiray heshiiska, laakiin Arsene Wenger ma uusan bixin karin ogolaanshaha kama dambeysta ah sababtoo ah wuxuu joogaa Koonfur Afrika wuxuuna ka tagay telefoonkiisa gacanta. Taasna waxay ahayd wakhti Koscielny uu sabab u ahaa wargeysyada Faransiiska ah oo sheegay in uu tababar la qaadanayay saaxiibadiisa Arsenal isagoo aan ku dhawaaqin heshiiskiisa islamarkaana uu dhameystiray Wenger. Kadibna wuxuu dhameystiray lambarka nambarka kooxda ee 6, oo hore u soo xirtay Philippe Senderos, kaasoo u soo dhaqaaqay Fulham.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Nolosha Xiriirka
Waxaa jira hadal ah in shaqo kasta oo wanaagsan oo u baahan tahay qofka saxda ah ee goobta saxda ah iyo waqtiga saxda ah. Xaqiiqdii, Laurent Koscielny ee garoonka dhexdiisa waxa uu leeyahay nolol ka baxsan garoonka kaas oo lagu kabo qurux badan Claire Beaudouin, oo ah saaxiibka muddada dheer.
Labadaba jacaylka ayaa guursaday sanadka 2015 iyada oo tiro badan oo Arsenal iyo Faransiis ah ay ka qeyb qaadanayaan.
Inkastoo faafaahinta Faransiiska ay u muuqatay mid xiiso badan Raphael Varane waa arooska oo dhacay isla maalintaas. Koscielny ma ogolaan in saxaafada Faransiisku sawirro sawirrada xaflad arooskiisa. Waxaan ku kalsoonaan karnaa in Koscielny uu qorsheynayo inuu sawirkiisa ku iibiyo mid ka mid ah kuwa ugu yar ee lagu soo daabaco internetka uu ka yimid Bacary Sagna xaaskiisa Ludivine.
Laurent iyo Claire waxay leeyihiin laba carruur ah oo qurux badan oo magacyo ah; Maina iyo Noah Koscielny sawir hoose oo la sawiray aabahood. "Carruurtaydu waxay iga caawiyeen inaan hore ugu sii socdo nolosha". ayaa yidhi, Laurent.
Ka dib tababarkiisa, Laurent wuxuu jecelyahay inuu tago caruurtiisa iskuulka wuxuuna ilaaliyaa ilaa dhamaadka galabnimada marka uu xaaskiisa ka noqdo shaqada.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Xaqiiqooyinka Qoyska
Isagoo ka bilaabaya qoyskiisa, awoowe Koscielny wuxuu ahaa Polish. Wuxuu u haajiray Waqooyiga Faransiis si uu u shaqeeyo sida macdanta Polishka. Nasiib darro, waqti dheer isaga iyo xubno kale oo ka mid ah qoyskiisa ayaa lumiyay luqadda Polish iyo xididdada.
Aabaha Laurent aabihiis ayaa ku ciyaaray qeybtii afaraad ee kubadda cagta Faransiiska ee kooxo badan ka hor inta uusan noqon tababare. Koscielny wuxuu aaminsanyahay aabihiis, Bernard, isaga oo dhulka ku haynaya isaga oo had iyo jeer ku caawinaya inuu xasuusto meesha uu ka yimid iyo sida uu u noqon doono runta xididadiisa. Aabihiisna wuxuu hanti weyn u leeyahay Qofka si fiican u fahmay adduunka kubada cagta. Sida Koscielny u dhigo, ..."Waxa uu ogaa waxa dhici kara haddii aanan cagahayga haynin. Nasiib wanaag, wuxuu had iyo jeer isha ku hayaa aniga oo had iyo goor hadana had iyo jeer ii soo bandhigaa si aan ugula taliyo doorashooyinka aan rabo inaan sameeyo. Waxaan u maleynayaa inaan nasiib badneyn. Waxaan helay waxbarasho aad uwanaagsan, labadaba waalidkay iyo walaalahay. Dhammaantood waxay i bari jireen qiimo muhiim ah. Maantana, waa meeshan aan u gudbiyo carruurteyda. "
Hooyo Laurent Koscielny hooyadeed ayaa had iyo jeer ka danbeeyay isaga oo bixinaya taageerada hooyada. Weli maanta, waxay aad u joogtaa noloshiisa. Sida uu u dhigo: "Waxay mar walba noqotey mid muhiim u ah xirfaddayda iyo nolosha: malaa'ig ilaaliye ah". Waxa uu leeyahay walaalo kubada cagta ah oo ah 10 sano ka weyn kana weynaa mar hore oo lagu ciyaaro horyaalada hiwaayadda.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Naftaada Shaqsiga
Laurent Koscielny wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Awoodaha Laurent: Waa Loyal (lab iyo dheddig labadaba), xajiya, falanqeyn, shaqeyn adag iyo aad u macquul ah.
Laurent ee Tabar darrida: Xishood, waxay ka walwalsan tahay walxaha, si aad ah u xaddidan nafsadda iyo dadka kale, waana shaqo oo dhan mana jirto cid ciyaaro.
Maxuu jecel yahay Laurent: Wuxuu jecel yahay xayawaanka, cunto caafimaad leh, buug, dabeecad iyo nadaafad guud.
Maxaa Layli Jecelahay: Ballanqaadka, waydiisanaya caawimo iyo qaadashada marxalada xarunta.
Laurent waa qof had iyo goor u fiirsada faahfaahinta ugu yar iyo dareenkiisa qoto dheer ee aadanaha wuxuu ka dhigayaa mid ka mid ah qofka ugu taxaddar badan inaad ogtahay. Nidaamkiisa hab-nololeedkiisa wuxuu xaqiijinayaa inaan waxba laga helin fursad. Laurent waa qof si xun u fahmi kara, maadaama uu ka maqan yahay awoodda uu u muujiyo, laakiin sababta oo ah ma aqbalayo dareenkiisa inuu noqdo mid sax ah, run ah, ama xitaa khuseeya marka laga soo horjeedo sabab.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Saaxiibtinimo
Bilowga xirfaddiisa Arsenal ma ahayn mid aad u sahlan. Si kastaba ha noqotee, waqti dheer ma qaadan Arsene Wenger Laurent ayaa ku caan baxay inuu macalin u noqdo macalinka halyeeyada ah.
Laurent Koscielny Childhood Story Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan -Kulanka S iyo A
Laurent waxa uu ka jawaabay su'aalihii QA-ga oo qiimo ku leh. Waxyaalaha hoose ee soo socda waa su'aalo iyo jawaabohooda.
Yaa waa ciyaaryahankii ugu adkaa ee aad ku kulantay kulan?
Drogba, oo aan qadarin.
Halka / nooca ciyaarta ma waxaad la kulantay guuldaradii ugu weynayd?
Finalka Euro ee France. Waxay ahayd waqti adag annaga. Sababtoo ah waxay ahayd dhacdo ah in qof kasta oo laga filayo Faransiiska. Waxaan u maleynayaa in guud ahaan ay ahayd guul, lakiin dhamaadkii guul darradu waa mid aad u xanuun badan. Mar walba waxaa jira dareen qaraar ah oo dhameystiraya xiisad sidan oo kale ah.
Goorma waxaad ku sugantahay inaad garoonka gashid, maxaad ka fekertaa?
Marka aan banaanka ku soo baxo, kama fekerayo wax badan, markaan ku dhigno munaasabado gacan-qabasho ah, waxaan isku dayayaa inaan xoogga saaro cayaaradayda oo kaliya oo aan cayaarahayga, inaan naftayda xusuusiyo waxyaabihii aan u baahnahay inaan sameeyo inta lagu jiro ciyaarta, waxaan isku deyayaa inaan siiyo kooxda ugu fiican, inaan natiijada ugu fiican helo.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantahay akhriskaaga Laurent Koscielny Childhood Story iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!